Language | သင္ကာဘုန္းျမင့္-Thinker Bhone Myint
သံုးစြဲ – ဆြဲသံုး
September 20, 2019 · 5:11 pm
August 14, 2019 · 5:26 pm
စကားလံုး ႏိုင္ငံေရး …
Tagged as Language, Politics
July 4, 2010 · 4:55 pm
တနေ့ကတော့ သင်တန်းမှာ စကားလုံး အသုံးအနှုန်းတွေ အကြောင်း ပြောဖြစ်ကြတယ်။ ဒါကတော့ ဖြင့် ဒုတိယအကြိမ်ပါ။
အထူးသဖြင့် စာနယ်ဇင်းများဟာ လူထုအဆင့် ဘယ်လောက် အထိ နားလည်အောင် ရေးသင့်တယ် ဆိုတာပါပဲ။
ပထမ ကိစ္စကတော့ gay ပါ။ အခြောက်ဆိုရင် လူတိုင်း သိပါတယ်။ ဒါပေမယ့် လူ့အခွင့်အရေး ဘာညာတွေနဲ့ ကိုင်ပေါက်ပြီး သူတို့ စိတ်ကြိုက် လိင်တူ ချစ်သူ ဆိုပြီး လုပ်လာတယ်။
Filed under Journalism, Language
December 10, 2009 · 4:27 pm
Using Slang: When and Where
Filed under Language, Media
Tagged as Language, Media
A Note on the Development of the Burmese Language
အရင်က ဖွဲ့တည်ရာမဂ္ဂဇင်းမှာလည်းထည့်ဖူးတယ်၊ ဘာမီဖီကေးရှင်းဆိုဒ်မှာလည်း တင်ဖူးတယ်။ အရင်က ဆိုဒ်မှာ လင့်ခ်ပဲ ညွှန်းခဲ့တယ်။ ခုတော့ ဖတ်ရအောင်ရော သိမ်းထားရအောင်ပါပြန်တင်ပေးလိုက်တယ်။ ၁၉၁၁ ကနေ ၁၉၄၁ အထိ ထွက်ခဲ့တဲ့ Journal of the Burma Research Society အတွဲ ၁ ကနေ ၃၁ အထိကို ဒေါ်လာ ၁,၃၀၀ နဲ့ ရောင်းမယ်လို့ အွန်လိုင်းမှာ ကြော်ညာထားတာ တွေ့လိုက်သေးတယ်။ (သင်ကာ)
By U Pe Maung Tin
Journal of Burma Research Society (JBRS)
Vol. 14, 1951
photo from myanmarisp.com
It isahappy sign for the future of the Burmese language that it is seriously grappling with the task of shaping itself into an adequate vehicle for the expression of modern Western ideas. In the course of their administration of the country, the English have found it necessary to impart these ideas to the people through the medium of Burmese as well as of English. Thus all government publications in Burmese (made of course with native assistance), are essays in modernized Burmese. But the new terms and expressions which these essays have introduced, will remain more or less stranded as petrified curiosities, until they happen to flow with the stream of the language and pass through the whirlpool of popular usage. The problem, however, is receiving national attention; and native writers, roused by the awakening of the national spirit, are finding suitable terms for the new ideas imported from the West.
Tagged as Language, Literature